Noloshu waxay bilaabataa dhamaadka aaga raaxadaada. - Neale Donald Walsch - xigasho Pedia
All oo dhan leeyihiin himilooyin iyo yoolal nolosha. Laakiin badiyaa waxay kuxiran tahay waxa aan ku aragno agagaarkayada iyo waxa dadka kale ee nagu wareegsan ay qabanayaan. Laakiin waxaan ubaahanahay inaan fahamno inaynaan sinaba isku xadidin nafteena.
Taas beddelkeeda waa inaan eegno fursadaha kaladuwan oo haddii ay suurtagal tahay sidoo kale aan isku dayno. Markaa kaliya waxaan si dhab ah u fahmi doonnaa xulashooyinka kala duwan ee la heli karo. Waxaan markaa sameyn karnaa qorshayaashayada si ku habboon.
Ogow in noloshu noqoto mid xiisa leh oo keliya marka aad xadidayso xuduudahaaga. Inaad ku dhex jirto aagga raaxada ee lagu qeexay waa wax aad u fudud. Uma baahna annaga inaan nafteena ku riixno inaan sameyno wax aan horay ugu diyaarsaneyn inaan qabanno. Taas kama dhigeyso inaan nafteena sahaminno oo aan ka sarreyno awooddeena.
Markaad ka soo baxdid aaga raaxadaada oo aad isku daydo shay aan la qarin, waxaad isku mar wada ogaan kartaa naftaada wax cusub. Waxyaabahani waxay nolosha ka dhigayaan kuwa xiisaha badan oo ku siin kara gees.
Waa dhamaadka aaga raaxadaada lagu qeexay in noloshaadu bilaabato. Waxaad naftaada u furi doontaa aqoonsi la'aan noloshaada u qaabeysa si aad u kala duwan oo riyooyinkuna sidoo kale isu beddelaan. Waxaad la kulantay dad cusub oo leh sheekooyin cusub iyo saameyn kala duwan adiga kugu leh.
Waxaad markaa yeelan doontaa dhiirigelinno kaladuwan oo horseedi doona himilooyin kala duwan. Waxaad arki kartaa naftaada adigoo ku dhex wareegaya dariiq aad u kala duwan oo nolosha ah oo aadan weligaa malalayn karin haddii aadan ka tegin aaga raaxadaada. U furfuran isbeddeladan oo u horseedo nolol xiise leh oo qancinaysa.
Quotes Aaga raaxada